How to test my Monitor for PWM flicker? - 💡💻 Iris - Software for Eye fiarovana, Fahasalamana sy Famokarana 🛌👀
Iris floss for Wayland
Buy amin'ny PayPal
Mividy amin'ny Debit / Sary nahazoan-Card
Buy amin'ny Bitcoin
Inona no atao hoe PWM mitsilopilopy?
PWM mitsilopilopy is a cheap way that manufacturers use to control the brightness of the screen by adding some breaks without light.
Raha tsorina dia, on a given interval your monitor is OFF then after some milliseconds ON again.
1. Ataovy ny mpanara-maso ny famirapiratry ny mazava ny Hardware 100% mampiasa ny bokotra Monitor.
2. Use Iris to control the brightness without PWM
Posted in Articles, Testing
contact@iristech.co · Fepetra · noforonin'i Daniel Georgiev.
Vita avy any Bolgaria
Mampiasa mofomamy mba hanolotra anao ho tsara kokoa Browsing traikefa, personalize afa-po ary hadihadiana toerana fifamoivoizana. Vakio ny momba ny fomba mampiasa mofomamy sy ny fomba afaka mifehy azy ireo amin'ny fipihana "Privacy Préférences". Raha manohy mampiasa ity Ndao, ianao manaiky ny fampiasana ny mofomamy.
Rehefa mitsidika misy tranonkala, dia mety hitahiry na retrieve momba ny navigateur, ny ankamaroany amin'ny endrika mofomamy. Mety ho io fanazavana momba anao, ny safidinao na ny fitaovana ary ny ankamaroany ampiasaina mba hahatonga ny asa toerana rehefa manantena izany. Ny fanazavana tsy mivantana matetika hamantatra anao, fa afaka manome anao kokoa aterineto traikefa manokana.
Satria manaja ny zo hanana fiainana manokana, dia afaka mifidy ny tsy hamela misy karazana mofomamy. Tsindrio eo amin'ny sokajy samihafa sasin-mba hahafantarana bebe kokoa ary hanova ny toerana misy anao Fikirana. Na izany aza, fanakatonana karazana mofomamy sasany dia mety hisy fiantraikany ny traikefa ny amin'ny toerana sy ny asa isika, dia afaka hanatitra.
Mamaky ary nanaiky ny politika fiarovana fiainan'olona.
Cookies izay ilaina amin'ny ny toerana hiasa araka ny tokony ho.
Ireo manampy antsika hamaly soa anao amin'ny fampiasana maimaim-poana ny fangatahana, ary mba hanome anareo fihenam-bidy raha misy olona nanasa anao ho any amin'ny Iris tranonkala.
PHPSESSID, manasa, ap_id
Ireo dia ampiasaina mba manara-maso mpampiasa fifandraisana sy mamantatra ny olana mety. Ireo manampy antsika hanatsara ny asa amin'ny alalan'ny fanomezana tahirin-kevitra mikasika ny fomba fandalinana mpampiasa mampiasa ity toerana.
TSY, fanekena, 1P_JAR, HERE
Hanakatona ny kaonty?
Ny kaonty dia mikatona sy ny antontan-kevitra rehetra dia ho voafafa tanteraka sy tsy azo sitrana. Azonao antoka ve izany?